The Devil All The Time ဖြန့်ချိသည့်ရက်၊ သရုပ်ဆောင်၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ အနှစ်ချုပ်များနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည် - Netflix ရုပ်ရှင်
The Devil All The Time ဖြန့်ချိသည့်ရက်၊ သရုပ်ဆောင်၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ အနှစ်ချုပ်များနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
The Devil All The Time - တွမ်ဟော်လန်သည် Arvin Russell ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ Cr ။ Glen Wilson / Netflix © 2020
စိတ်ကူးရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ 8
Even မှ Mia McKenna-Bruce ၏အသက်၊ အမြင့်၊ Instagram ကိုရယူပါ။ Bree မင်းသမီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်သမျှ My Block alum တွင် Ronni Hawk သည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်အဖမ်းခံရသည်
Netflix ၏ The All The Time အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
Netflix ဟာသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ထားသည့်အသစ်ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဝေမျှခဲ့သည်။ မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ်။ သူတို့ရဲ့တွစ်တာပို့စ်အရ Netflix မူရင်းရုပ်ရှင်ကို ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာမှာနေရာတိုင်းမှာဖြန့်ချိမှာဖြစ်တယ်။
Netflix ရုပ်ရှင်သည်အန်တိုနီယိုကင်ပိုပိုမှအနောက်ဘက်အနောက်ဘက်ရှိ Gothic ပုံပြင်ဖြစ်သည်၊
၏ ensemble သွန်း မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် ဒီဖြန့်ချိမှုအသစ်ရဲ့စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အောက်တွင်သင်အပါအဝင်လာမည့်ရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည် မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် လွှတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အနှစ်ချုပ်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာမီထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည် မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် ရရှိနိုင်ဖြစ်လာ!
Netflix တွင် The Devil All The Time ဖြန့်ချိသည့်နေ့စွဲ
Netflix ကဖြန့်ချိသည် မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် ကမ္ဘာတစ်လွှားစက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်သည်အစိမ်းရောင်အားဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ အစောပိုင်းတွင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ Netflix ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရန်အလွန်ကြာကြာစောင့်ရန်မလိုပါ။
၏သွန်း မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် ဖြစ်ပါတယ် ... stacked ။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင် Tom Holland (ကဲ့သို့) အံ့’s ခြင်းရဲ့ပင့်ကူလူသား ), Sebastian Stan ( အံ့’s ခြင်းရဲ့ဆောင်းရာသီစစ်သား ), ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန် ( ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်မီးခွက် ဆည်းဆာ စီးရီး), ဘီလ်Skarsgård ( ဒါဟာ စီးရီး), Mia Wasikowska ( Wonderland ရှိအဲလစ် စီးရီး), Eliza Scanlen ( ကလေးသူငယ်များ၊ ), Jason Clarke, Riley Keough, Haley Bennett ကနှင့်ဟယ်ရီ Melling ။
Antonio Campos ( အပြစ်သား, အံ့’s ခြင်းရဲ့ပြစ်ဒဏ် ) သည် Donald Ray Pollock ဝတ္ထု၏သူ့ကိုယ်ပိုင်လိုက်လျောညီထွေမှု (Paulo Campos နှင့်တွဲဖက်ရေးသား) ကိုညွှန်ကြားနေသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Jake Gyllenhaal နဲ့ Randall Poster တို့ကပူးတွဲထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒန်နီ Bensi နှင့် Saunder Jurriaans ( Ozark, ရန်သူ ) ရုပ်ရှင်ရဲ့ရမှတ်ရေးသားနေကြသည်။
The Devil All The Time နောက်တွဲယာဉ်
Netflix ကပဲနောက်တွဲယာဉ်ကိုမျှဝေလိုက်သည် မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ်!
Tom Holland၊ Robert Pattinson၊ Jason Clark, Riley Keough, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska နှင့် Eliza Scanlen တို့ပါဝင်သော DEVIL ALL the TIME အားပထမဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရှုခြင်း။
စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Netflix တွင် pic.twitter.com/3qNW1EaVfb
- NetflixFilm (@NetflixFilm) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၃ ရက်
ထို့အပြင် Netflix ကအတွက်ပိုစတာကိုမျှဝေခဲ့သည် မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် မကြာမီလာမည့်နောက်တွဲယာဉ်အတွက်သင်၏မျက်လုံးများကိုစောင့်ရှောက်ရန်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု (သင်အောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ။ ပိုစတာတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောထိပ်တန်းငွေတောင်းခံသရုပ်ဆောင်များစွာပါ ၀ င်သည်။
- Netflix Queue (@netflixqueue) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၀ ရက်
The Devil All the Time အကျဉ်းချုပ်
မာရ်နတ်သည်အစဉ်မပြတ် Donald Ray Pollock (ရုပ်ရှင်မထွက်ခင်ငါ quarantine မှာဖတ်ရမည့်စာအုပ်) ၏နာမည်တူဝတ္ထုကိုအခြေခံသည်။
ဤတွင်မှတဆင့်ရုပ်ရှင်၏အနှစ်ချုပ်ပါပဲ Netflix :
ဗဟိုရာသီ 8 netflix လွှတ်ပေးရန်
Knockemstiff, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှင့်၎င်း၏အိမ်နီးချင်း backwoods တွင်ညစ်ညမ်းသောတရားဟောဆရာ (Robert Pattinson)၊ လိမ်သည့်စုံတွဲ (Jason Clarke နှင့် Riley Keough) နှင့်ကောက်ကျစ်သောရဲအရာရှိ (Sebastian Stan) - Arvin Russell (Tom Holland) အနီးတွင်ဆုံတွေ့သည်။ သူနှင့်သူ၏မိသားစုကိုခြိမ်းခြောက်သောမကောင်းသောအင်အားစုများ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအကြားကာလကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးအန်တိုနီယိုကမ်ပိုလိုသည် 'THE THE THE THE THE THE THE ALL THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE DEVILLE THE THE THE TIME TIME TIME AJTLE' ဒါရိုက်တာအန်တိုနီယိုကမ်ပိုလိုသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုဆန့်ကျင်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းကိုဖော်ပြသည်။
The Devil All the Time အဓိကအနုပညာ
DEVIL ALL THE TIME မတိုင်မီနှစ်ပတ်အတွင်း Netflix သို့ကမ္ဘာအနှံ့ရောက်ရှိသွားသည်။ pic.twitter.com/WEVGn4sHpl
- NetflixFilm (@NetflixFilm) စက်တင်ဘာ ၂ ရက်၊
ဤအတောအတွင်း Netflix ရုပ်ရှင်အသစ်၌သင်မည်သည့်အရာများအားစိတ်လှုပ်ရှားနေသနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းနေရာတိုင်း Netflix တွင်ပြသမည့်အစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
မင်းသမီးသတို့သမီး netflix ကိုကြည့်ပါ
သေလွန်သောသူတို့သည်ရာသီ5hulu လမ်းလျှောက်
Riverdale ၏ရာသီ2Netflix မှလာပေတဲ့အခါမှာ
Netflix အပေါ်ရာသီ9ဗဟို